Fanosorana ny marary – 2trondro
Home / Fiangonana / Ny sakramentan'ny / Fanosorana ny marary
Hitan'ny Fiangonana amin'ny fiainan'ny mpino, Azo lazaina, tahaka ny olona iray dia amin'ny alalan'ny tenany manokana an-efitra ho any amin'ny "Tany Nampanantenaina" ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Ray ny Fanjakan'Andriamanitra.
Toy ny Israelita fahiny ireo andalan-teny nanampy tamin'ny alalan'ny an-efitra amin'ny mana sy rano avy amin'ny vatolampy, Toy izany no nanohana ny Kristianina teny an-dalana noho ny fahasoavana izy ireo amin'ny alalan'ny sakramenta (jereo Paoly Voalohany Taratasy ho an'ny Korintiana 10:1).
Ny sakramenta, ny fomba efa napetrak'Andriamanitra hanadiovana, fahana, manasitrana, ary hikarakara ny zanaky ny Fanekem-pihavanana Vaovao. Ny Tompo dia nanome ho an'ny dingana tsirairay avy ara-panahy dia: ny fiandohan 'ny dia amin'ny Batemy; ny sakafo sy ny fanamafisana ao amin'ny Eokaristia sy ny Fankaherezana; ny famerenana amin'ny laoniny, raha lavo ao amin'ny Fanekem-pinoana isika, ary amin'ny fomba manokana ao amin'ny fanosorana ny marary, izay matetika koa ny fiomanana farany alohan'ny niampita mihoatra ny tokonana ny fahafatesana mba ho raisina ho ny Ray ny fitiavana sy fiahian.1
Ny sakramenta, famantarana izay mampita ny fahasoavana dia mariky. Ny hevitra ara-tsakramenta dia hita manerana ny Baiboly, fa na aiza na aiza lalina kokoa noho ny tamin'ny manasitrana fanompoana ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy.
Diniho ny tantaran'ny Filazantsara ny lehilahy teraka jamba izay tanimanga, ny ara-batana zavatra, lasa ny fantsona ho an'ny ny fampitana ny fahasoavan'Andriamanitra (John 9:6). Indray mandeha koa, vehivavy amin'ny hemorrhage no nahasitrana azy ny amin'ny Mpamonjy ny fitafian'i-izay, Ny herin'Andriamanitra dia nafindra ny alalan 'ny zavatra Jesosy akanjo (jereo Mark 5:25 FF.).
Ao amin'ny Baiboly, menaka masina ampiasaina amin'ny fombafomba fanasitranana. Hitantsika izany ao amin'ny fanompoana ny Apôstôly, izay "namoaka demonia maro, ary nohosorany diloilo ny marary maro ny ka nositraniny " (Mark 6:13). Ny fampiharana ny fanosorana ny marary dia ofisialy fombam-pivavahana ao amin'ny Fiangonana Apostolika, tahaka ny Apôstôly James nambara soratra:
Misy eo aminareo marary? Aoka izy hampaka ny loholon 'ny fiangonana, ary aoka ireo hivavaka ho azy, fanosorana azy diloilo amin'ny anaran'ny Tompo; ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ny marary, ary ny Tompo hanangana azy; ary raha nanota, dia havela ny helony. Ary noho izany manaiky ny heloka iray hafa, ary mivavaha ho an'ny iray hafa, mba ho sitrana (azy ireo. 5:14-16).
Io andalan-teny dia manamafy ny torohevitry ny Ekleziastika, "Ny zanako lahy, rehefa marary aza malaina, fa hivavaka ho an'i Jehovah, ary Izy ihany no hahasitrana anao. Omeo ny ny fahadisoanao sy hitarika ny tananao amin'ny fomba marina tsara, ary diovy ny fonao amin'ny ota rehetra " (38:9-10).
Ny fanasitranana ny vatana sy ny fanahy dia matetika no mifamatotra, na ny farany dia heverina ho ny asa lehibe kokoa. I Jesoa nanontany ny mpitsikera:
"Iza moa no moramora kokoa, ny hoe, 'Voavela ny helokao,Sa ny manao hoe, 'Mitsangàna, ka mandehana?'Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manana fahefana etỳ ambonin'ny tany hamela heloka ... Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka mandehana an-trano. " (Matthew 9:5-6)
Ao ny fanosorana ny marary, ny fanasitranana ara-batana matetika miaraka ny fanasitranana ara-panahy, na dia ny fanasitranana ara-panahy no tena ifantohan'ny ny fombam-pivavahana.2 toa fifanandrifian-javatra, ny Apôstôly asa ny fanosorana amin'ny Mark 6:13 dia talohan'ny ny mitory amin'ny fibebahana ny fahotana (6:12). Toy izany koa, in James 5 Nifandimby ny fanamafisana avy amin'ny vatana ara-panahy ho fanafodiny, ny firesahana momba "ilay lehilahy marary" ho "voavonjy" sy ny "sitrana" Midika ny mpanota mahazo famelan-keloka.
Ny vavolombelona ny fanosorana ny marary ao amin'ny asa soratra kristianina voalohany ara-tantara dia sparse amin'ny ampitahaina amin'ny hafa sakramentan'ny, na izany no voafaoka ao amin'ilay fivalozana fanaon'ny ny Fiangonana, indrindra fa ny amin'ny fitokisany amin 'ny mpitondra fivavahana ho amin'ny famelan-keloka.
Tamin'ny momba ny taona 150, Saint Justin Maritiora nanamafy fa ny Pretra, izay nitarika ny fankalazana ny Eokaristia, nanana eo amin'ny andraikitra maro ny fikarakarana ny marary (voalohany fialan-tsiny 67). In about 215, fanekena ny herin 'ny eveka hamela heloka, Saint Hippolyte Roma nanambara fa nitso-drano ny diloilo ny eveka hoe: 'Homeny hery izay rehetra fanandramana azy sy ny fahasalamana ny rehetra izay mampiasa azy " (Ny apostoly Tradition 5:2). Ny Filan-kevitry ny Nicée in 325 Namoaka didy ny Vatsy masina tsy tokony nandà ny faty (Canon 13).
Ny foto-kevitra momba ny ara-panahy dia misy teny ao amin'ny teny latina vatsy masina na "sakafo ho an'ny ny dia,", Izay manondro ny Eokaristia nahazo nandritra ny farany Fombafomba. ↩
The Katesizin'ny Fiangonana Katôlika firenena, "Nandritra ny taonjato maro ny fanosorana ny marary dia natolotra bebe kokoa momba ireo ihany tao amin'ny Marary efa ho faty. Noho izany dia nandray ny anarana 'Extreme hosotra. "Na dia eo aza izany fivoarana ny litorzia dia tsy tsy ny mangataka ny Tompo fa ny olona marary mba nampody ny fahasalamana raha mety ho sahaza ny famonjena" (amin'ny. 1512). ↩